Ibe iji mepụta nyocha ịntanetị na otu esi eme ha | ECommerce ozi ọma
Ibe iji mepụta nyocha ịntanetị na otu esi eme ha
Encarni Arcoya | 21/07/2021 11:49 | Nchịkọta, CRM na Nnukwu data
Ọ bụrụ na ị na-eleta netwọkụ mmekọrịta, ị ga-achọpụtala na nyocha ndị dị n'ịntanetị aghọla ejiji. Ọ bụ ụzọ ndị ọrụ, ndị enyi na ndị ibe ha ga-esi nye echiche ha gbasara ụfọdụ isiokwu a jụrụ na nyocha a. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị maka ndị mmadụ na-eji ha n'ọtụtụ isiokwu: ndọrọ ndọrọ ọchịchị, oge ezumike, ọzụzụ ... Ọbụna na eCommerce gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ndị online nnyocha ndị e mere, otu esi eme ha na peeji nke kachasị mma maka ya, lee, anyị ga-ekwu maka ya niile.
1 Gịnị bụ nyocha ndị dị n'ịntanetị
2 Otu esi eme ha
3 Ibe iji mepụta nyocha ịntanetị
3.3 Nnyocha anụ
3.4 Google Drive, maka nyocha ndị dị n'ịntanetị
Gịnị bụ nyocha ndị dị n'ịntanetị
Anyị nwere ike ịkọwa nyocha nke ịntanetị dịka usoro ajụjụ a na-ajụ mmadụ na-enweghị onwe ya, kama iji ụdị ntanetị ka ha wee nye echiche ha gbasara otu isiokwu.
El Ebumnuche nke nyocha ndị a abụghị ihe ọzọ karịa ịmara ihe otu ìgwè mmadụ, ndị zara ajụjụ ahụ, chọrọ ma ọ nwere ọtụtụ ojiji. N'ihe banyere eCommerce, ịnwere ike iji nyocha iji mee ka ndị ọrụ nwee ike inye echiche ha banyere ihe onyinye inye onyinye ọzọ nwere ike ịbụ, ihe ha ga-achọ ịnata (onyinye mberede, koodu nwepu, wdg)
Site na ha, otutu mmadu erutela nihi na ekele nke ebili mmiri n ’Intanet, odighi oke ala; Onye ọ bụla nwere ike isonye na ya, nke ahụ na-enyere aka ịnwe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ ume ịtụ vootu. Na mgbakwunye, ha na-ahụ anya nke ọma (ọ ga-adabere na ibe ebe ị mere ya ma ọ bụ otu ị si hazie ya, n'ezie).
Nanị ihe ndọghachi azụ nke ị ga-enwe na nyocha ndị a n'ịntanetị bụ ọ bụ "akpa ókè" ebe ọ bụ na, site na Internetntanetị, ị na-amanye ndị mmadụ ka ha nwee njikọ, na ndị na-enweghị ohere enweghị ike isonye (n'ihe gbasara inwe ụlọ ahịa anụ ahụ ị nwere ike ịme abụọ mgbe niile wee soro ha). Ma ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị bụ ndị toro eto, ị ga-ahụkwa ihe mgbochi ndị ọzọ iji nweta ụdị nyocha a.
Otu esi eme ha
Ugbu a ị matara ihe nyocha intaneti bụ, ka anyị gaa mụta otu esi eme ya? O yikarịrị ka, ọ bụrụ na ị nwere iwu nke sayensị kọmputa, nke a dị ka nzuzu, ebe ọ bụ naanị na ị ga-aga na ibe, mepụta ya ma malite ya, mana ọ ga-adị irè? Ihe kacha ekwe omume bụ na mba.
Ma ọ gaghị abụ n’ihi na ị ga-ebu ụzọ mee obere nyocha. Ọ dị mkpa ka ị mara ihe kpatara ị ga-eji mee nyocha ahụ, ma ị ga-ajụ echiche, ịrịọ maka nhọrọ, iji melite ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ gị ...
Nyocha ọ bụla kwesịrị inwe nzube Ebe ọ bụ na ịjụ ihe ma emesịa ime ihe ọ bụla agaghị emebi oge gị, ọ ga - emekwa ka ndị ọzọ tufuo ya ma ha ga - ahụ na ị baghị n'uche echiche ha, yabụ mgbe ị mere ọzọ, ha agaghị esonye.
Nzọụkwụ ọzọ ị ga-emerịrị bụ ịmata onye ị ga-agwa. Otu na-eto eto agaghị adị ka ndị okenye. Nke mbu, nihi na uzo esi agwa ibe anyi okwu na agbanwe, n’asusu, na uto ... Site n’ilekwasị anya na uzo abuo a, igha enweta ihe di nma maka nyocha intaneti.
Mepụta nyocha ahụ ga-abụ nzọụkwụ na-esote, anyị kewara nke a n'ime abụọ:
N'otu aka, mara ajụjụ ndị a ga-ajụ, Ọ bụrụ na a ga-enwe a na-emeghe azịza, a oke nke azịza, ma ọ bụrụ na naanị otu ma ọ bụ ọtụtụ azịza ga-aza, ole ga-adị, ma ọ bụrụ na e nwere ọnụ ọgụgụ ...
N'aka nke ọzọ, mepụta arịrịọ nke akwụkwọ ntanetị. Nke ahụ bụ, mee ihe na-adọta onye ọrụ ahụ ma, si otú a gbaa ha ume isonye. Nke a nwere ike ịbụ naanị obere ma ọ bụrụ na ị na-eji ibe eme nyocha ịntanetị, mana taa enwere ọtụtụ na ha niile emela atụmatụ ha nke oge a.
Ibe iji mepụta nyocha ịntanetị
Na-ekwu maka nyocha ndị dị n'ịntanetị, ị ga-achọ ịma nke ibe ị nwere ike ịmepụta ha? Nke mbụ, ị kwesịrị ịma na e nwere ọtụtụ weebụsaịtị ebe ị ga-eme ya. Ya mere, anyị na-enye gị nhọrọ nke ndị anyị weere na ọ kachasị baa uru ma ọ bụ bara uru maka ojiji zuru ebe niile (ọ bụghị naanị maka eCommerce, mana n'ozuzu ya).
A na-akwụ ụgwọ weebụsaịtị a, ee. Mana o nwere free version ruo 2500 Ibọrọ natara. Ọ bụrụ na azụmahịa gị pere mpe, ịnwere ike ịtụle ya n'ihi na ọ bụghị ndị niile na-eso ụzọ gị ka ị sonyere na ajụjụ a, mana ọ bụ naanị obere akụkụ.
Nsogbu dị na nhọrọ nweere onwe ya bụ na ịnweghị ike ịnwe nkwado, mmekọrịta na Google, ma ọ bụ ịhazi onwe gị. Ma na ọkwa nke ịkwụ ụgwọ ọ dị ezigbo mma.
Lee ị nwere ọzọ ngwá ọrụ maka ajụjụ ntanetị. Ọ na - enyere gị aka ịmepụta akaụntụ n’efu iji mepụta nyocha ịntanetị nkeonwe. N'ezie, na mmachi, nke ahụ bụ na ọ na-ekweta nzaghachi 100 kwa ọnwa, ị nwere ike ịme nyocha 5 (ee, yana ajụjụ na-enweghị njedebe), yana ọ nwere nyocha nke nsonaazụ.
O nweela ndebiri, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka imewe ahụ ma ọ bụrụ na ịdịghị mma na ya, ịnwere ike ịmegharị otu n'ime ndị ị ga-eme ya ngwa ngwa.
Nke a sitere na peeji nke maka nyocha ịntanetị ihe a kacha mara amara na nke eji. Ọ bụ peeji ịkwụ ụgwọ, mana, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, ọ nwere nsụgharị nwegasịrị ikike ụfọdụ:
Ọ na-enye ohere 10 ajụjụ. Naanị ndị a na-enye gị nhọrọ ịbụ ụdị 15 (mepere, mechiri emechi, enume, ọtụtụ nzaghachi ...).
Naanị hapụ nzaghachi 100 maka nyocha ọ bụla.
I nweghi ike ibudata nsonaazụ nke akwụkwọ ntanetị n'ịntanetị (maka na ị ga-akwụ ụgwọ).
Google Drive, maka nyocha ndị dị n'ịntanetị
Did maghị na enwere ike iji nyocha Google rụọ nyocha? Ee ee, otu ọrụ ọ nwere bụ inye gị ohere iji mepụta ụdị ntanetị ị nwere ike itinye ajụjụ ịchọrọ, yana azịza ya.
Kpọmkwem, a na-eme ya site na mpempe akwụkwọ Google yana, ọ bụ ezie na imewe ahụ dị ezigbo mkpa yana enweghịkwa nhazi ọ bụla, ọ na-arụ ọrụ ya nke ọma, na mgbakwunye na ịnwe 100% n'efu, na-enye gị ohere iji ndebiri na ọtụtụ ụdị ajụjụ.
Anyị na-aga nhọrọ ọzọ maka nyocha ntanetị na, ọ bụ ezie na a na-akwụ ya ụgwọ, na-egosipụta ndebanye aha n'efu maka ihe ọ na-enye gị: nzaghachi 1000 kwa nyocha, ụdị nzaghachi 25, ajụjụ a na-akparaghị ókè.
Nanị ihe ọghọm bụ na, mgbe a bịara n’ichepụta na ịhazi ajụjụ ajuju, ọ ga - egbochi gị. I nwere ike na-agụnye a logo na ịgbanwe ndabere agba nke nnyocha e mere. Ma ọ bụrụ na ị naghị echegbu onwe gị banyere nke ahụ, ọ nwere ike ịbụ nhọrọ ị ga-atụle.
Enwere ọtụtụ nhọrọ karịa ndị anyị tụlerela ebe a, mana ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-akwụ ụgwọ na ụfọdụ adịghị ike na ndebanye aha n'efu. Nkwado anyị bụ na ịnwale ọtụtụ nyocha ịntanetị tupu ị chọpụta nke bụ ihe kacha mma na ihe ị na-achọ ma si otú ahụ bido ya ndị ọrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Nchịkọta, CRM na Nnukwu data » Ibe iji mepụta nyocha ịntanetị na otu esi eme ha
Akwụkwọ 4 kacha mma ịchọ ọrụ
Otu esi ehichapụ ibe Facebook